a 6,10 Ime Control VLC
Ụzọ kasị mma na-eme ka VLC Media Player ndabara ọkpụkpọ na gị na kọmputa bụ ịtọ ya otú ahụ n'oge echichi onwe ya. VLC Media Player, n'oge usoro nke echichi,-ajụ gị ma ị ga-amasị akpakọrịta na iche iche mgbasa ozi faịlụ na ụdị na VLC ma ọ bụ. Site ndabara, niile faịlụ na ụdị na-enyocha na ya-enye gị ohere uncheck ọ bụla ma ọ bụrụ na ị chọrọ.
Otú ọ dị, ọ bụrụ na ị mere nke a mgbe wụnye VLC Media Player na kọmputa gị ma chọrọ ime ka ọ ndabara ọkpụkpọ ugbu a, ị na-nri ebe. Anyị ga-agwa gị otú ị eme ihe na nnọọ mfe nzọụkwụ na na kwa na Windows na Mac abụọ. Ok, Ya mere ka na-amalite.
Part 1: Olee ka VLC ndabara ọkpụkpọ maka Windows
Part 2: Olee ka VLC ndabara ọkpụkpọ maka Mac
Na-agba ọsọ VLC Media Player na-aga Ngwaọrụ> Mmasị
Họrọ Interface bọtịnụ na aka-ekpe-n'akụkụ ma họrọ Melite mkpakọrịta na ala.
Họrọ ụdị faịlụ na ndepụta ahụ kwesịrị n'ihu gị ugbu a, ị ga-achọ VLC na-ndabara ọkpụkpọ maka ma ọ bụ i nwere ike na-aga na nhọrọ Họrọ niile maka akpakọrịta niile faịlụ na ụdị na VLC na iti Save ịzọpụta ntọala ndị a . Na nke a i mere VLC ndabara ọkpụkpọ na gị Windows kọmputa.
Nke mbụ niile, chọta ụdị faịlụ na ị chọrọ VLC na-ndabara ọkpụkpọ maka na nri pịa ya. Họrọ nhọrọ Get Ama. Na ngalaba Open Na, chọta ma họrọ VLC si menu / wedaa ndepụta. Iji hụ na mgbanwe a Nwela etinyere niile yiri faịlụ, see button ịgbanwe All.
N'ihi na ha na-akpa faịlụ na ngwa anya draịva / mgbasa ozi na VLC, ihe atụ CD s na DVD s, na-eso nke a ụzọ - Apple> System Mmasị na họrọ nhọrọ nke CD & DVD si ngalaba Hardware. Họrọ Ndị ọzọ Ngwa si ​​popup menu nhọrọ na ala na-ekwu 'Open DVD Player' ma họrọ VLC si ndepụta-eme ka ọ ndabara ọkpụkpọ maka gị ngwa anya media faịlụ dị ka mma.
> Resource> VLC> Olee otú ime ka VLC ndabara ọkpụkpọ